Granuloma Inguinale - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ကျန်းမာရေး အခြေအနေများ » ကျန်းမာရေးအားလုံး » ကျန်းမာရေးအခြေအနေများ » Granuloma Inguinale
Granuloma Inguinale ကဘာလဲ။
Granuloma inguinale ကို Donovanosis ဟုလည်းခေါ်ပြီး Klebsiella granulomatis ယခင်အမည် Calymmatobacterium granulomatis ဘက်တီးရီးယားကြောင့် ဖြစ်သော အခြေအနေတစ်ခု ဖြစ်သည်။ ၎င်း၏ဝိသေသနလက္ခဏာမှာ လိင်အင်္ဂါတွင် lesion ဖြစ်ခြင်းပင်။ ဖွံ့ဖြိုးမှုနောက်ကျသော တိုင်းပြည်များ၌ အတော်အဖြစ်များသည်။ ၎င်း၏ ပုံမှန်အမည်နှစ်မျိုးဖြစ်သော granuloma inguinale နှင့် donovanosis တို့အပြင် တခြားအခေါ်နည်းသော အမည်များမှာ granuloma genitoinguinale, granuloma inguinale tropicum, granuloma venereum, granuloma venereum genitoinguinale, lupoid form of groin ulceration, serpiginous ulceration of the groin, ulcerating granuloma of the pudendum နှင့် ulcerating sclerosing granuloma တို့ဖြစ်သည်။
၎င်းကိုတွေ့ရသောတိုင်းပြည်များတွင် ကုသရန်ဆေး ရှားပါးမှုကြောင့် ရောဂါမှ မကုသရပဲ ရှိနေတတ်သည်။ ထို့အပြင် နာကျင်မှုမရှိသော လိင်အင်္ဂါအနာများကြောင့် ဆစ်ဖလစ်ကာလသားရောဂါနှင့်လည်း မှားတတ်သေးသည်။ အနာများမှာ အတွင်းအပြင် တစ်ရှူးများဆက်တိုက်ပျက်စီးရာမှ ဖြစ်လာကြသည်။ အကျိအချွဲများထွက်ခြင်း သွေးအရများသော တစ်ရှူးများတွင်ဖြစ်လျှင် သွေးထွက်ခြင်းတို့ ဖြစ်နိုင်သည်။ Donovanosis ၏ ဖျက်စီးတတ်သော သဘာဝက တခြားသော ရောဂါဖြစ်ပိုးများ ဝင်နိုင်စေရန် အန္တရာယ်များလာစေပါလိမ့်မည်။
Granuloma Inguinale က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
ရောဂါမှာ များသောအားဖြင့် မိန်းမကိုယ် သို့ စအိုနှင့် လိင်ဆက်ဆံခြင်းမှ ကူးစက်ပါသည်။ ရှားပါးစွားဖြင့် ပါးစပ်နှင့်ဆက်ဆံခြင်းမှ ကူးခဲသည်။ အမျိုးသမီးများထက် အမျိုးသားများက ၂ ဆ ပိုအဖြစ်များသည်။ ပိုးကူးစက်မှုမှာ အသက် ၂၀ – ၄၀ ကြားလူများတွင် အဖြစ်များဆုံးဖြစ်သည်။ သို့သော် ရောဂါဖြစ်ပွားနိုင်သောအချက်အလက်များကို လျှော့ချခြင်းအားဖြင့် စီမံနိုင်ပါသည်။ အချက်အလက်များထပ်မံသိရှိဖို့အတွက် ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးသင့်ပါသည်။
Granuloma Inguinale ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
Granuloma inguinale ၏ ပြင်းထန်မှုပေါ်မူတည်ကာ လက္ခဏာများမှာ တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦးမတူကြပါ။
ရောဂါရှိလူတစ်ဝက်မှာ စအိုတစ်ဝိုက်တွင် အနာများရှိကြသည်။
သေးငယ် မာတင်းတော့ အဖုများ လိင်အင်္ဂါတစ်ဝိုက် သို့မဟုတ် စအိုတစ်ဝိုက်တွင် ပေါက်လာခြင်း
အရေပြားမှ ပြဲသွားပြီးနောက် အဖုများမှာ ကြွတက် မာတင်း နီးရဲသော Granulation တစ်ရှူးများ ဖြစ်လာပါသည်။ ၎င်းတို့မှာ မနာကျင်တတ်ပဲ ထိခိုက်မိလျှင် သွေးထွက်လွယ်၏။
ရောဂါမှာ ဖြည်းဖြည်းချင်းပျံ့ပြီး လိင်အင်္ဂါတစ်ရှူးများကို ဖျက်စီးပစ်သည်။
လိင်အင်္ဂါနှင့် ၎င်းတစ်ဝိုက်အရေပြားများ အရောင်ပျောက်သွားတတ်သည်။
အစောပိုင်းအဆင့်များတွင် Donovanosis နှင့် Chancroid တို့အား ခွဲရခက်သည်။ သို့သော် နောက်ပိုင်းတွင် Donovanosis မှာ အဆင့်လွန် လိင်အင်္ဂါကင်ဆာ၊ lymphogranuloma venereum နှင့် anogenital cutaneous amebiasis စသည်တို့နှင့် ဆင်တူသွား၏။
စောလျင်စွာ အတည်ပြုခြင်းနှင့် ကုသခြင်းတို့မှာ ရောဂါအခြေအနေ ပိုဆိုးမလာအောင်နှင့် အရေးပေါ်ကိစ္စများ ဖြစ်မလာအောင် ကာကွယ်ရာတွင် အရေးပါပါသည်။ ထို့ကြောင့် ပြင်းထန်သည့်အခြေအနေကို ကာကွယ်ရန်အတွက် ဆရာဝန်နှင့် တတ်နိုင်သလောက် မြန်မြန်ပြသ ဆွေးနွေးပါ။
Granuloma Inguinale ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
Donovanosis (granuloma inguinale) မှာ Klebsiella granulomatis ဘက်တီးရီးယားကြောင့် ဖြစ်ရခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုရောဂါကို အပူပိုင်းနှင့် အပူလျော့ပိုင်းဒေသများ ဥပမာ အရှေ့တောင်အိန္ဒိယ၊ ဂူရာနာနှင့် နယူးဂီနီတို့တွင် တွေ့ရများသည်။
အမေရိက၌ တစ်နှစ်လျှင် ၁၀၀ လောက်ရှိကြောင်း မှတ်တမ်းများကဆိုသည်။ ထိုဖြစ်ရပ်အများစုမှာ ရောဂါဖြစ်သောနေရာများသို့ ခရီးသွားဖူးသူ၊ ထိုနေရာများမှ လာခဲ့သူများဖြစ်နေကြသည်။
မိန်းမကိုယ်နှင့် စအိုတို့အား ဆက်ဆံမှုများက ရောဂါပျံ့စေသည့် နည်းလမ်းများဖြစ်သည်။ ရှားပါးစွာဖြင့် ပါးစပ်နှင့်ဆက်ဆံခြင်းမှ ကူးခဲပါသည်။ အမျိုးသားများမှာ အမျိုးသမီးများထက် ပိုအဖြစ်များ၏။ အသက် ၂၀-၄၀ ကြားအရွယ်များမှာ ကူးစက်မှုအဖြစ်ဆုံးဖြစ်သည်။
ငါ့ဆီမှာ Granuloma Inguinale ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဘာ်တွေက မြင့်တက်စေသလဲ
အောက်ပါတို့ကို သင်ဖြစ်နေပါက Granuloma inguinale ဖြစ်နိုင်ချေပိုများပါလိမ့်မည်။
Granuloma Inguinale ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
သင့်တွင် Granuloma inguinale ရှိကြောင်း ဆရာဝန်မှ သံသယဖြစ်လျှင် ရောဂါကို စမ်းသပ်ကြည့်ရှုပါလိမ့်မည်။ လူနာ၏ လိင်ရာဇဝင်နှင့် စမ်းသပ်မှုပေါ်မူတည်ကာ နာကျင်မှုမရှိ၊ မာတင်းသော အနာ၊ Granulation တစ်ရှူး အလိပ်ဘောင် စသည်တို့ကိုတွက်ချက်ပြီး ရောဂါကိုဆုံးဖြတ်ပါလိမ့်မည်။ ဆစ်ဖလစ်အနာများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ပေါင်ခြံပြန်ရည်ကြိတ်အခြေအနေမှာ ပိုပျော့လေ့ရှိသည်။ တစ်ရှူးနမူနာယူပြီး Wright-Giemsa ဆိုးဆေးနှင့်စစ်ဆေးခြင်းက ရောဂါကို အတည်ပြုရာတွင် အကူအညီဖြစ်ပါသည်။ Donova bodies များ တစ်ရှူးနမူနာတွင် ရှိနေပါက Donovanosis ဟု အတည်ပြုနိုင်ပါသည်။ Donova bodies ဆိုသည်မှာ အချောင်းပုံစံ၊ ဘဲဥပုံစံ အကောင်များကို လူနာ၏တစ်ရှူးနမူနာမှ mononuclear phagocytes သို့မဟုတ် histiocytes ဆဲလ်များအတွင်း တွေ့ရခြင်းဖြစ်သည်။
Wright ဆိုးဆေးနှင့်ဆိုးသည့်အခါ သူတို့ကို ခရမ်းရင့်ရောင်အဖြစ်တွေ့ရသည်။ အဆိုပါ ဆဲတွင်းနေပစ္စည်းများမှာ Gram-negative ပိုးကောင်များသာ ဖြစ်ပါသည်။
Granuloma Inguinale ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
ဘက်တီးရီးယားကူးစက်ခြင်းဖြစ်သောကြောင့် ပဋိဇီဝဆေးများသုံးပါသည်။ ဆေးများမှာ azithromycin, doxycycline, ciprofloxacin, erythromycin နှင့် trimethoprim-sulfamethoxazole တို့ဖြစ်သည်။ ရောဂါကို အရှင်းပျောက်စေရန် ရေရှည်ကုသရန်လိုသည်။ ကုသမှုအများစုမှာ ၃ ပတ်ကြာတတ်သည်။ သို့မဟုတ် အနာများပျောက်သည်အထိ ကြာသည်။
ပျောက်ကင်းသွားပြီဟုထင်ရသော်လည်း ရောဂါမှာ ပြန်ဖြစ်တတ်သောကြောင့် မှန်မှန်ပြန်ပြရန် လိုအပ်ပါသည်။
လူနေမှုပုံစံပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ အိမ်သုံးကုထုံးတွေအသုံးပြုခြင်းက Granuloma inguinale ကို ကုသရာမှာ ဘယ်လိုအထောက်အကူပြုနိုင်မလဲ။
အောက်ဖော်ပြပါ လူနေမှုပုံစံများနှင့်အိမ်သုံးကုထုံးများက သင့်အနေဖြင့် Granuloma inguinale ကိုကုသသည့်နေရာနှင့် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်လုပ်ရာတွင် အကူအညီပေးနိုင်ပါသည်။
ရောဂါမှာ ပဋိဇီဝဆေးများဖြင့် ပျောက်သည်။ ထို့ကြောင့် donovanosis မှာ ဖွံဖြိုးပြီးနိုင်ငံများတွင် အဖြစ်နည်းသည်။ အမေရိကန်တွင် တစ်နှစ်ကို ဖြစ်ရပ် ၁၀၀ သာရှိသည်။ သို့သော် ရောဂါဖြစ်ပွားသော နိုင်ငံများတွင် လိင်ဆက်ဆံမှုများရှိခဲ့ပါက ရောဂါဖြစ်နိုင်ချေတိုးလာပါမည်။ ထိုသို့အန္တရာယ်ရှိ လိင်ဆက်ဆံမှုများကိုရှောင်ခြင်း လိင်မဆက်ဆံခင် လိင်မှတစ်ဆင့်ကူးသောရောဂါများကို နှစ်ဦးနှစ်ဖက်စစ်ခြင်းက donovanosis ကိုကာကွယ်ရန် အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
ထို့အပြင် ကွန်ဒုံးသုံးခြင်း medical check-up မှန်မှန်လုပ်ခြင်းက granuloma inguinale ကိုကာကွယ်ရန်အတွက် အရေးကြီးပါသည်။
Granuloma inguinale. https://medlineplus.gov/ency/article/000636.htm . Accessed April 14, 2017.
Granuloma inguinale. http://emedicine.medscape.com/article/1052617-overview . Accessed April 14, 2017.
Granuloma inguinale. https://www.cdc.gov/std/tg2015/donovanosis.htm . Accessed April 14, 2017.